Jaamacada Galkacyo (GU) oo soo dhaweysay Arday ka qalinjabisay Dugsiyada sare ee Galk. | KEYDMEDIA ONLINE
Jaamacada Galkacyo (GU) oo soo dhaweysay Arday ka qalinjabisay Dugsiyada sare ee Galk.
Gaalkacyo (KON) - Kulan aad loosoo agaasimay islamarkaana lagu qabtay xoolka weyn ee caalamiga ah ee Hotel Dharas magalada Galkacyo ee xarunta maamulka Galmudug ayaa lagu qabtay qado sharaf ay soo qabanqaabiyeen guddiga dhiirigalinta iyo Horumarinta jaamacada Galkacyo GU.
Qadadan ayaa waxaa casuumad loo fidiyay ardayda ka qalinjabisay dugsiyada sare ee magalada Galkacyo si loogu sharaxo tayada waxbarsho ee ay leedahay jaamacada GU Iyadoo halkaasi ay guddigu kusoo bandhigeen maadooyinka ay jaamacadu u hayso ardayda si ay u kala doortaan maadada ay danaynayaan.
Munaasabadan ayaa waxaa sidoo kale kasoo qaybgalay M/weynaha dowlada goboleedka Galmudug General Cabdi Qaybdiid oo halkaasi ka amaanay kaalinta ay kaga jirto Jaamacada Galkacyo GU dhanka waxbarshada deegaanada Galmudug iyo guud ahaan gobolada dhexe ee Soomaaliya, Guddiga ayaa ardeyda ka qalin jabisay dugsiyada sare ee Gaalkacyo ka siinayay warbixin maadooyinka lagu barto Jaamacada GU.
Sikastaba ha ahaatee ma ahan markii ugu horeysay ee ay jaamacada galkacyo Gu u qabato shir ardayda ka qalinjabisa dugsiyada kala duwan ee magalada Galkacyo iyadoo sanad walba qabata shir loogu talagalay ardayda ayaa hada waxa ay wadaan dadaal ka duwan kii hore oo ay ku dhiirigalinayaa ardayda faraha badan ee sanadahan dambe ka qalinjabisa dugsiyada magalada Galkacyo.
Waalidiinta dhalay Ardayda ka qalinjabisa dugsiyada Galmudug ayaa ku dhibanaa wixii ka horeeyay 2010 oo aysan ka jirin gobolka wax jaamacad ah iyadoo iminka ay gobolka ka jiraan jaamacadaha kala ah Galkacyo GU iyo Jaamacada Mudug MU oo labaduba la aas aasay dhamaadkii sanadkii 2010.
Warbixintaan waxaa Keydmedia Online usoo diray: Liibaan Nuuriye